यसरी टुक्रदैछ मधेश, हेर्नुहोस सिके राउतको बृहत योजना (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : March 11, 2019
मुलुक बिग्रनुमा मुख्य तीन कारण हुन्छन् –
१. खराब दल,
२. खराब नेता र
३. खराब कार्यकर्ता ।
राणाका पालामासम्म नेपाल औसत रहेको इतिहासमा हामीले पढ्न पाउँछौं । विश्व मञ्चमा हाम्रो शक्ति मध्यम थियो त्यति बेला । विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिक संक्रमण २०१५ सालसम्म जेलियो । २०१७ सालपछि ०४६ सालसम्म पञ्चायत व्यवस्था र त्यसपछि बहुदलीय–गणतन्त्रका शासनका अनेक प्रयोगले मुलुक आन्तरिक रुपमा कमजोर बन्यो । यस अवधिमा दलहरू निर्माण भए, नेता जन्मिए र कार्यकर्ता उम्रिए । सबका सब खराब भएपछि अहिले नेपाल विश्वकै सबैभन्दा खराब, दरिद्र, गरिब र नालायकको देश बन्न पुगेको छ । यस लेखमा तथ्यांक केलाउन संभव छैन । यतिमात्र बुझौं,
नेपाली जनताका लागि सबै शासक खराब प्रमाणित भइसके ।
पत्रकारिता गर्नेले त झन् राजनीति गर्नै हुँदैन । राजनीतिमा लाग्ने हो भने पेसा छोड्नुपर्छ । दलगत पत्रकारिताले अफवाहमात्र फैलाएको दृष्टान्त छ । यो देशका लागि घातक हुन्छ । यसका तीता अनुभव हामीसँग छन् । पशुपति शर्माको गीत ‘लुट कान्छा लुट’ बजिरहँदा सत्तापक्षका कथित पत्रकारले गीत बन्द गर्नुपर्छ भनेर ढोल पिटे । ती कस्ता पत्रकार हुन् जो सरकारको गुनगान गर्छन् । आखिर त्यसको प्रत्युपादक परिणाम सरकार हल्लिनेगरी बर्सियो । कारण सत्ताधारी कथित पत्रकार थिए ।
सहमति भइसकेपछि सीके राउत र उनका पृथकतावादी समर्थकले भनिसके – ‘‘सरकारले जनमत संग्रह स्वीकार्यो ।’’ सहमतिको २ नंबर बुँदामा जनमअभिमतद्वारा समस्याको हल गर्ने शब्दमा टेकेर अब राउतले स्वतन्त्र मधेसको मागलाई देशव्यापी बनाउने निश्चित छ । यो सहमतिले देश टुक्राउने बीउ रोपिदियो । सरकारको नियत उनलाई सघाउने हैन भने अब राउतले जनअभिमतका नाममा पृथकतावादी जनमत संग्रहको माग उठाउनेबित्तिकै सरकारले उनलाई फेरि जेल पठाउन सक्छ ? यस्तो विषयमा जनअभिमत शब्द राख्न मिल्छ ? सरकारले जनताका आशंका गलत साबित गर्न तुरुन्त निम्न काम गर्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र हामीले यो सहमतिलाई सही भन्न सक्छौँ ।
नत्र यो केपी–सीकेको मुलुक टुक्य्राउने डिजाइनको प्रथम अध्याय भनेर बुझ्नु पर्नेहुन्छ ।
बिनोद त्रीपाठी (सम्पादक – सौर्य दैनिक)